आज पौष २७ गते, हेर्नुहोस आजको रशिफल - Likhu Online
आज पौष २७ गते, हेर्नुहोस आजको रशिफल
२७ पुष २०७७, सोमबार ०९:४८ प्रकाशित
वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो – परिवारभित्रै वा छरछिमेकमा सम्पन्न हुने धार्मिक÷सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुने दिन हो । मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ । भाग्यबलमा अभिबृद्धि हुनेछ । धार्मिक तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापबाट प्रतिष्ठा र सम्मान पाइने छ । ठूलाबडाको साथसहयोग पाइने छ । कामको दायित्व थपिने सम्भावना छ । नयाँ ठाउँमा निवेशको वातावरण बन्नेछ । मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – उपलब्धीमूलक र रमणीय यात्राको सम्भावना छ । तपाईंका बानीब्यहोरा र आन्तरिक क्रियाकलाप अनुयायीका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । काममा ढिलासुस्ती भए पनि चिताएको परिणाम प्राप्त हुने योग छ । परोपकार र धार्मिक क्षेत्रका क्रियाकलापमा ध्यानकेन्द्रित हुनसक्छ । सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ । साँझ परिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ ।
राशिफल, माघ २
कालिन्चोक माताको दर्शन गर्दै आजको राशिफल पढौं
राशिफल ; पौष २६ गते आइतवार
आज पौष २५ गते, कस्तो रहला तपाईंको दिन? हेर्नुहोस आजको रशिफल
पौष २४ गते शुक्रवार को राशिफल
आज पौष २२ गते कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस आजको रशिफल
आज पौष २१ गते कस्तो रहला तपाईंको दिन? हेर्नुहोस आजको रशिफल
कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस आजको रशिफल
राशिफल : पौष १९
पुष १४ गते मंगलबार हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
दैनिक राशिफल ; पौष १३
राशिफल पौष १२
आजको राशिफल।हेर्नुहोस तपाईंको आजको दिन कस्तो छ?